Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Trinidad sy Tobago » Tongasoa i Tobago amin'ny fiverenanao: mamporisika ny fizahan-tany any an-toerana ny TTAL
Tongasoa i Tobago amin'ny fiverenanao
Ny Tobago Tourism Agency Limited sy ireo mpiantsehatra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany dia mitady fomba hanentanana ny asa ara-toekarena ho an'ny nosy miaraka amina hetsika mikendry ny tsena anatiny.
Rehefa nanidy ny sisintany ny governemanta Trinidad sy Tobago tamin'ny tapaky ny volana martsa mba hanalefahana ny fiparitahan'ny Covid-19, ny masoivoho dia nanao fampielezan-kevitra navoakan'ny mpampiasa mba hitazomana ny "Mpanonofy an'i Tobago" ho an'ny mpandeha sy ny mponina, mampiseho ny nosy mba hijanonan'ny mpitsidika isam-paritra sy iraisampirenena eo afovoan'ny krizy COVID-19.
Ankehitriny, ny masoivoho dia mamindra ny hafatry ny toerana aleha avy amin'ny “Dreaming of Tobago” mankany amin'ny “We Welcome Your Return”, manomboka dingana vaovao amin'ny fitantarana mba hampiroboroboana ny nosy amin'ny tsena anatiny. Rehefa miatrika ny famohana sy ny fanalefahana fameperana ny firenena, ny fanokafana ny torapasika, ny trano fisakafoanana, ny fisotroana ary ny toerana manintona ary ny manintona dia manararaotra ny fivelaran'ny fizahan-tany any an-toerana.
Nanatontosa horonantsary fanentanana vaovao tamin'ny 10 Jolay ny TTALth antsoina hoe Tongasoa i Tobago amin'ny fiverenanao, mampiseho ny tolotra maro samihafa amin'ny toerana itodiana any Tobago amin'ny alàlan'ny fijoroana vavolombelona sy horonantsary notifirin'ireo mpankafy ny nosy, satria ny Agence dia mikasa ny hamadika ny nofinofy ho zava-misy ho an'ireo mponina sy mpitsidika avy amin'ny rahavavin'i Trinidad.
Sheena Des Vignes, mpandrindra ny varotra TTAL, dia nanambara: "Ny mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria dia niatrika fotoan-tsarotra tsy takatry ny saina manoloana ny COVID-19, ary ny fampielezan-kevitra an-trano kasaina hatao dia ny famporisihana ny mponina handrafitra ny fivahinianany any Tobago manaraka ary hanohana ireo orinasa eo an-toerana manerana ny nosy .
Tianay ny hanome aingam-panahy ny mponina ao an-toerana amin'ny fitantarana an-trano tena izy, ampitaina amin'ny alàlan'ny sehatra mifandraika amin'ny mpihaino ao an-toerana, amin'ny fananganana ny fahatsiarovan-tena amin'ny tolotr'i Tobago sy ny # 101reasonsTobago. ”
Ny fampielezan-kevitra ihany koa dia hahita ny maso ivoho miasa miaraka amin'ireo vondrona mpiantsehatra toy ny Fikambanan'ny Hotely sy fizahantany ao Tobago mba hikarakara sy hampiroborobo ny zavatra hatao, toerana ipetrahana ary faritra hafa mahaliana mba hamoronana toeram-ponenana tonga lafatra ao Tobago.
Louis Lewis, tale jeneralin'ny Tobago Tourism Agency Limited dia nanamarika fa ny fifantohan'i Tobago amin'ny fizahan-tany any an-toerana sy ny toeram-ponenana dia zava-dehibe hanentanana ny harinkarenan'ny nosy, izay miankina betsaka amin'ny dia sy fizahan-tany.
“Amin'ity tontolo feno fanamby ity izay nanaporofoana ny maha-zava-dehibe ny fizahantany sy ny maha zava-dehibe ny fizahan-tany dia tianay hofaritana fa handray fepetra stratejika izahay hitondra ny anjara birikiny amin'ny fitohizan'ny toekarenan'i Tobago mandritra ireo fotoan-tsarotra ireo. Ny fanentanana ny tsenan'ny fizahantany eto amintsika dia hitarika amin'ny fahasitranana amin'ny tontolon'ny virus corona, indrindra fa ny fitsangatsanganana iraisampirenena dia tsy azontsika amin'izao fotoana izao. Raha ny tokony ho izy, tena zava-dehibe ny hivoahanay any Trinidad sy Tobago ary hanohana ny eo an-toerana, miaraka hiara-miaina ny sehatry ny fizahan-tany any Tobago. ”
Ny birao raharaham-bahiny sy ny Commonwealth UK dia manampy fisavoritahana bebe kokoa amin'ny fiverenan'ny sambo fitsangantsanganana